Zuva raakarasika pfungwa: ndezvei, ndiani akazvinyora uye nei achiverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Kwayaka: Penguin Chile
Pakati pebhuku rinovhurwa, pane zvimwe izvo, nekuda kwetimu, iyo nguva kana nhoroondo, kukunda uye kuenda kure kwazvo. Ndozvakaitika kuZuva rakapererwa neUtsanana, zano rekuti, kunyangwe pakutanga iwe usingazive kwekutora, gare gare rinokukochekera nenzira yekuti chaunoda iwe kusvika kumagumo kuziva chii zvaita. zvapfuura.
Kana iwe uchida ziva zvinhu nezveZuva rawakarasika njere, sekuti ndiani akanyora, ndezvei, ndeapi mavara kana iri bhuku rakakodzera, tinokukoka kuti uverenge zvatakakugadzirira.
1 Ndiani munyori weZuva iro pfungwa dzakarasika
2 Ndeipi zuva raakarasika njere?
2.1 Vanyori kubva kuZuva reUtsanana Vakarasika
3 Iri bhuku rakakodzera kuverenga here?
4 Chenjera: kune chikamu chechipiri
Ndiani munyori weZuva iro pfungwa dzakarasika
Iye 'mhosva' yeZuva raakarasika njere hapana mumwe asi Javier Castillo. Uyu munyori wechiSpanish anobva kuMijas akaburitsa runyorwa rwake rwekutanga muna 2014. Muchokwadi, akazvishambadza. Zvisinei, vaparidzi vakamuona paakatanga kubudirira, kusvika padanho rekuti vakati wandei vakazvipira kuzviburitsa. Chekupedzisira, akasarudza Suma de Letras uye yakaburitswa zvakare mu2016.
Kusiyana nevamwe vanyori, vakatakura chido chekunyora uye vakachidzidzira, Javier Castillo aive chipangamazano wezvemari. Yakanga iri munguva yake yekusarudzika paakaburitsa hunyanzvi hwake uye akaunza iro rekutanga bhuku pamberi. Uye kubvira ipapo haina kumira nekuti ine zvinyorwa zvishanu pamusika, yekupedzisira, Iyo Mweya Mutambo, kubva 5.
Ndeipi zuva raakarasika njere?
Pasina kuburitsa chero chinhu chakavanzika, nyaya yeZuva rekuti pfungwa dzakarasika Zvinotanga nehumhondi nekusungwa. Jacob anoonekwa asina kupfeka uye akatakura musoro wakaveurwa wemukadzi. Zviripachena, mapurisa anomusunga uye edza kutsvaga kuti ndiani mukadzi uyu, nei akamuuraya, kupi mutumbi, nezvimwe.
Kuti vaite izvi, vanotumira nyanzvi yeFBI Stella kuti abudise ruzivo irworwo maari. Asi Jacob akafunga kumuudza imwe nyaya yechinyakare, kupa chirevo kune izvo zvakaitika ... Uye kubva ipapo nyaya inotanga kuve yekufungidzira, chakavanzika uye kupenga.
Vanyori kubva kuZuva reUtsanana Vakarasika
Kuti zvijekese kuti iwe uve nemaonero evatambi vauchasangana navo muZuva rakarasika Sanity, pano tinozvinyora.
Jakobho. Ndiye mutambi wekutanga waunosangana naye uye hauna chokwadi chekuti anopenga here, kana ane pfungwa dzakanaka kana chii chinoitika kumurume iyeye.
Dr Jenkins. Hunhu pakutanga iwe unoona sechipiri, asi muchokwadi iye akakosha kune iyo nyaya. Iye ndiye director wepfungwa yepfungwa uko Jacob anogamuchirwa.
Steven. Mubereki. Uchazviona kaviri; sezvo munyori achikuratidza nhanho yemunhu makore apfuura uye mumwe aripo. Pamwe chete naye, vane hukama hwepedyo nevamwe vatambi: Karen, Amanda naCarla.
Stella hyden. Mbiri yeFBI yavanotuma kuti vataure naJacob uye vazive chakamutungamira kuti apare mhosva yaakapara.
Hatigone kuburitsa zvakati wandei nezvevanyori nekuti kana tikadaro, tinopedzisira takupa zvikwanisiro uye nekukanganisa zvikamu zvakakosha zvebhuku.
Iri bhuku rakakodzera kuverenga here?
Mushure mezvatakakuudza, chinhu chakajairika ndechekuti iwe une maonero ekuti ibhuku raungade kuverenga here kana, nekuda kwechirongwa, nyaya kana nzira yekuudza, haina kukukwezva zvakakwana. Ichokwadi ndechekuti nzira yekuudza nyaya ndiyo iyo inokuzadza iwe nekusahadzika pakutanga.
Paunoverenga chitsauko chekutanga hauna ruzivo rwezvakaitika. Iwe hauzive kuti ndiani, sei, chii chakaitika. Munyori anongokupa kurova mashoma muZuva iro kurasika kwepfungwa kwakarasika. Kana isu tikawedzera kune izvo chokwadi chekuti chitsauko chechipiri chinoshandura mamiriro uye mavara, zvinokusiya iwe wakanyanya kubviswa uye iwe unogona kufunga kuti harisi bhuku riri nyore kuverenga.
Mumapeji ese, iwe uchaenda kutsvaga mbiri nguva masiketi akatsanangurwa gare gare munoverengeka. Kune rimwe divi "aripo" (tichifunga nezve gore iro runyorwa rwakanyorwa kana kuti runoriisa) uye kune rimwe racho zvakapfuura (makore akati wandei apfuura munguva yeva protagonists). Pakutanga haina kugadzikana, kunyanya nekuti haina kujekesa kuti iwe uripo here kana kuti munguva yakapfuura. Paunenge uchitoziva mavara, iko kujekesa hakuna basa.
Hapana mubvunzo kuti iyo nyaya pakutanga inoratidzika kunge isina musoro, uye kanopfuura kamwe iwe ungafunga kuti inofinha, kana kuti hapana chakaipa kuti uenderere mberi nayo. Asi chakavanzika chakakomberedza mavara chinoita kuti iwe usakwanisa kumusiya; Unoda kuziva zvinoitika, kuti munyori achabuda sei mumusoro iwoyo waakaisa mavara. Uye chimwe chinhu chandinofarira ndechekuti kumagumo hachisi chinhu chaunotarisira. Kune zvakawanda zvakawandisa zvinopedzisira zvave kupukunyuka, zvinokushamisa iwe, uye ndicho chinhu chakanaka. Kunyangwe iwe uri muverengi anofarira, iwe unenge uine yako dosi yekushamisika mubhuku.
Nekudaro, kune kwedu chikamu, uye chikamu changu chega nekuti ndakaverenga bhuku, iri hongu, tinorikurudzira. Kunyangwe usinga batwe pakutanga, ramba uchipa iwo mukana nekuti kune chakavanzika chiripo, zviripo.
Chenjera: kune chikamu chechipiri
Tisati tasiya nyaya iyi, tinofanirwa kukuzivisa iwe. Zuva Rawakarasikirwa neUtsanana hwako ibhuku rinogona kuverengwa rakazvimirira; ine chairo ine mavambo nemagumo. Nekudaro, mumapeji ekupedzisira iye munyori chaiye anoita "chimwe chinhu" chinokusiya uine huchi pamiromo yako uye, kana panguva yawakazvipira kuti uverenge iwe wakabatwa, iyo yakasununguka mhete iyo yaanosiya ichaita kuti iwe ude iyo yechipiri. bhuku.
Icho chiri pamusoro Musi wakarasika rudo uye yatove muzvitoro zvemabhuku, saka haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti ibude. Mariri, chikamu chechipiri chenyaya yacho chinotaurwa, chakanangana neavamwe mavara, asi ichiwedzera zvimwe zvishoma zvinoonekwawo sekwechipiri mune yekutanga.
Hakusi kuti ibhuku raunofanira kuverenga nenzira yekumanikidza, nekuti muchokwadi kana iwe uchigutsikana neZuva iro Kurasika Kwakarasika, pamwe harizokubvunze; Asi kana iwe uri mumwe weavo vanoda kuve nekugadziriswa kwakakwana kwechakavanzika, saka tinozvikurudzira.
Uye newe? Wakaverenga here bhuku kana mabhuku? Wakafungei / iwe wafungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Zuva iro pfungwa dzakarasika